Ambongadiny TPE Yoga Mat miaraka amin'ny Carrying Strap Fitness mat ho an'ny Floor Exercises Manufacturing and Factory |XGEAR
TPE Yoga Mat misy tsihy ara-batana mitondra tady ho an'ny fanazaran-tena amin'ny gorodona
XGEAR fanatanjahan-tena tsihy vita amin'ny TPE-namana tontolo iainana izay tsy misy poizina, tsy misy fofona, azo averina, avo lenta kokoa ary abrasion tsara kokoa, raha oharina amin'ny fitaovana PVC, NBR na EVA nentim-paharazana hafa.
Ity tsihy yoga tsy mitongilana ity miaraka amin'ny tady mitondra, tsy fehin-kibo yoga fotsiny izy io, tady manenjana ihany koa ho an'ny fanafanana, manana tsipika fampifanarahana tsara ho an'ny yoga, Pilates ary fanazaran-tany.
● Akora TPE mety amin'ny tontolo iainana:Ny tsihy ara-batana ataontsika dia vita amin'ny TPE (Thermoplastic Elastomer) izay tsy misy poizina, tsy misy fofona ary azo averina, tsara kokoa noho ny PVC nentim-paharazana hafa, NBR na EVA yoga mats.
● Anti-Skid & Fingotra tsara kokoa:Ny tsihy fanatanjahatena dia manome traction tsara sy fikojakojana ambony noho ny sosona ambony vita amin'ny texture manokana, afaka manakana ny vatanao tsy hiala amin'ny toerany.Izy io dia afaka mitazona tsihy tsy hitsoaka amin'ny tany amin'ny alàlan'ny famolavolana ny Wave Bottom Layer.Noho izany dia afaka mijanona hifantoka ianao rehefa manao Yoga, Meditation, Stretching, Pilates ary Fanatanjahan-tena.
● Fandehanana tsara kokoa:Ny endri-javatra ho an'ity tsihy TPE yoga premium ity dia ny hakitroky sy ny faharetana avo kokoa, noho izany ny tsihy fanazaran-tena dia tsara kokoa.Tena mety amin'ny fanalefahana ny fanaintainana amin'ny faritra saro-pady toy ny tonon-taolana, lohalika, kiho, hato-tanana, lohalika.
● Maivana sy ela velona:Ny refin'ny tsihy yoga matevina 1/4": 72"X 24" X1/4" milanja 30 ounces.Ny fehikibo stylish dia mahatonga azy io ho entina entin-tanana.Tsy manahy ny ho rava na hirodana noho ny fananana maharitra.
Laharan'ny entana 202373
ara-nofo Thermoplastic elastomer
endri-javatra Ny rano, ny skid-mahatohitra, ny hakitroky avo sy ny faharetana
Fikarakarana vokatra Sasana amin'ny tànana ihany
Dimensions (haben'ny boaty anatiny) L24" x W5" x H5"
Haben'ny baoritra L24.8" x W15.75" x H20.47" (12pcs/boaty)
● Mahatanty hamandoana ny tsihy yoga.Mora ny mamafa sy manadio amin'ny savony sy rano.Azafady, tehirizo tsara ny rivotra aorian'ny fampiasana azy.
● Tonga miaraka amin'ny tady ampiasaina roa: Tsy tady yoga mat fotsiny, fa tady mihinjitra ihany koa mba hanafanana.
Izy io dia fitaovana fanazaran-tena tsara ao an-trano ho an'ny Yoga, fisaintsainana, fanitarana, Pilates ary fanazaran-tena amin'ny gorodona.
teo aloha: Seza deck azo entina miforitra miaraka amin'ny Frame Aluminum sy ny sandriny
Manaraka: XGEAR Maivana sy mafy orina Pop Up Shower Lay Efitrano manokana ho an'ny lasy, fitsangatsanganana amin'ny habeny lehibe
8-ply Professional Heavy Battle Tady sy Weavin...
Fampiofanana haingam-pandeha miaraka amin'ny tohatra TPE ho an'ny ...
Ball Fitness Anti-Burst sy Baolina Yoga ho an'ny fanatanjahan-tena ...